SPY989 - OMG Spy Hidden Camera Bug Detector & Ho an'ny birao, trano ary fiara - Vahaolana OMG
Detector Anti Spy Spy, Detector Bug, Detector RF, Detector Camera miafina, Finder an'ny fakantsary ho an'ny finday Audio Bug Camera Detector Finder
SPY989 dia fitaovana entina mandehandeha natao hamantarana fakantsary mpitsikilo (miseho ho zavatra anatiny samy hafa) tsy maninona na ON izy ireo na OFF. Ny fitaovana dia tsy mahamarika fa tsy ny fakan-tsarimihetsika tariby fotsiny, fa koa ireo tsy misy tariby izay mampiasa transmitter afaka mandefa vaovao hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 10 metatra.
Ny fitsipika momba ny asa dia mifototra amin'ny vokatry ny fandrehitra. Mamoaka hazavana ny fitaovana ary mahazo ny emission taratra (ao anatin'izany ny fipoahana taratra avy amin'ny fakantsary mpitsikilo). Koa satria ny hazavan'ny taratra taratra avy amin'ny solomaso fakan-tsary dia avo kokoa imbetsaka noho ny taratra avy amin'ny zavatra hafa, ka ny famaritana ny toerana fakantsary dia tsotra.
Ny fitsipika fototra ahafahana mamantatra fakan-tsary mpitsikilo dia ny fikarohana tokony hatao amin'ny toerana mety ahafahan'ny olona mametraka fakantsary mpitsikilo. Ny toerana mety hapetraka indrindra amin'ny fametrahana fakan-tsary dia toerana ahafahana mijery mora foana ny toerana iasana, toerana fitsaharana (seza, sofa, sns.) Ary ny vavahady. Ny fakan-tsary dia azo apetraka ao amin'ny habaka lavarangana valindrihana mihantona, eo an-joron'ny trano, hazo misy rivotra, singa fanaka (fitafiana, mezzanine, sns.), Kojakoja fampiononana na fampitaovana horonantsary, sns. Tokony hoheverinao fa mety misy maromaro fakan-tsary. Ny fahitana fakantsary iray na roa dia tsy tokony ho antony handinihana ny efitrano nodiovina tanteraka. Ilaina ny manamarina ny toerana rehetra izay ahafahana manao rakipeo latina mba hahazoana antoka 100%.
Mba hamaritana izay mampirehitra anao - solomaso fakantsary mpitsikilo na taratra tsotra fotsiny amin'ny faritra malama (oh: fitaratra na fitaratra) dia azonao atao ny miala kely ary manohy mandinika ilay faritra mitovy amin'ilay fitaovana miasa. Amin'ity tranga ity dia manjavona ny flare tsotra iray, miova na manova be ny tanjany. Na izany aza, ny teboka mamirapiratra amin'ny fakantsary fakantsary dia mijanona eo amin'ny toerana iray ihany ary misy fiovana kely amin'ny hamafin'ny flare mandra-pijanonanao amin'ny fakan-tsary iray.
Tokony ho tadidinao ihany koa fa ny halaviran'ny asa tsara indrindra izay tsy mihoatra ny 10 metatra ary ny fakan-tsary dia tsy misy afa-tsy ao anatin'ny faritra fonosiny. Vokatr'izany, ho azo antoka kokoa dia ampirisihina hijerena ireo toerana mampiahiahy indrindra amin'ny lafiny samihafa.
* Hamarino ireo famantarana onja elektronmagnetika (RF) navoakan'ny fitaovana kendrena
* Tadiavo ny sarin'ilay solomaso an'ny fakan-tsary
* Mahita famantarana infrared navoakan'ny fakan-tsary
* Kitiho ny fakan-tsarimihetsika pinhole izay maty
* Miasa hatramin'ny 12 ora aorian'ny fiampangana azy tanteraka
1. Ny fitaovana Eavesdropping Wireless na Tracker dia napetraka ao amin'ny toerana misy ny fiara sy ny birao ary ny toerana ifampiraharahana amin'ny orinasa;
2. Ny telefaona finday manokana dia raisina an-tanana na mitondra tena “tsy ara-dalàna”;
3. Fanamarinana fiarovana / fiarovana ny trano fidiovana hotely, trano fandraisam-bahiny, efitrano fidiovana, efitrano fitafiana, sekoly fialamboly, fanaraha-maso ny sekoly, fitaovam-piadiana, sns.
4. Fanarahana GPS miafina amin'ny fiara fanofana, fiara efa niasa.
Alarm mode: feo mitete infrared detect
Tarika fahita matetika: 10-3000 (MHz)
Fiasa miasa: 5-10 arakaraka ny hamafin'ny mari-pamantarana hazavana (m)
Fiatrehana miasa: 5 (V)
Sehatra fampiharana: efitrano fandraisam-bahiny hotely, toerana rehetra ahiahianao
Special Features: Tamper Alarm, tantera-drano / tsy misy toetr'andro
Anarana iombonana amin'ny teny: mpitsikilo fakan-tsary mpitsikilo
Fotoana fiasana: 12 ora
Ny halaviran'ny famantarana ny signal RF: GSM: 0.5-3M; 3G / 4G: 0.2-1M; WiFi: 0.1-1M
Faritra matetika amin'ny detection IR: 750-1000nm
Halaviran'ny detection IR: 1-10m (miankina amin'ny tanjaky ny hazavana)
Fahefana famantarana laser: Kilasy II 1mw
Fijerena maso: 5x optical magnification
Fifandraisan'ny mpandray anjara: DC 5V1A karazana C
Lanja afa-karatsaka: 215G
Lanja tsy afa-karatsaka: 360G